ကော်စတာ၏နေရာကို ဟီဂူအင်အစားထိုးနိုင်မည်ဟု ဟာဇက်ယုံကြည်၊ ရှက်ဖီးနှင့်အက်ဖ်အေဖလားပွဲတွင် ? - Yangon Media Group
ချဲလ်ဆီးတောင်ပံကစားသမား ဟာဇက်က ဒီယေဂိုကော်စတာ ထွက်ခွာ သွားပြီးနောက် ဂိုးများစွာသွင်းယူနိုင် သည့်တိုက်စစ်မှူးမျိုး လိုအပ်နေသည်ဖြစ် ရာ အငှားဖြင့်လာရောက်ကစားမည့် ဟီဂူ အင်က အသင်းအတွက်အကောင်းဆုံး အင်အားဖြည့်တင်းမှုဖြစ်လာမည်ဟု ယုံ ကြည်ကြောင်းဆိုခဲ့သည်။
ကော်စတာသည် ၂ဝ၁၇ ခနှစ်တွင် ချဲလ်ဆီးမှ အက်သလက်တီကိုသို့ ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီး ¤င်း၏နေ ရာကိုအစားထိုးရန် မိုရာတာ နှင့် ဂီရော့ဒ်တို့ကိုခေါ်ယူခဲ့ သော်လည်း ကော်စတာကဲ့ သို့ ပုံမှန်ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သည့်အတွက် နည်းပြဆာရီမှာ ဟာ ဇက်ကို အထောင်တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် အသုံးပြုနေရသည်။
သို့ရာတွင် ဇန်နဝါရီဈေးကွက်၌ အာဂျင်တီးနားတိုက်စစ် မှူးဟီဂူအင်ကို ခြောက်လအငှားစာချုပ်ဖြင့်ခေါ်ယူခဲ့ရာ ကော်စတာထွက်ခွာသွားပြီးနောက် လစ် လပ်နေသောတိုက်စစ်နေရာကို ဟီဂူအင် ကဖြည့်တင်းနိုင်မည်ဟု ဟာဇက်ကယုံ ကြည်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ဟာဇက်က ”ဒီရာသီမှာ ကျွန်တော် တို့ကစားပုံကောင်းပေမယ့် တိုက်စစ်မှာ ဂိုးသွင်းပေးနိုင်ခဲ့ကစားသမားမျိုး ပျောက် ဆုံးနေပါတယ်။ စပါးနဲ့ပွဲမှာ တစ်ဦးတည်း သုံးဂိုးသွင်းနိုင်မယ့် တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးသာ ပါခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီပွဲဟာ ၅-၁ လောက်နဲ့ အဆုံးသတ်သွားမှာပါ။ ဒီယေဂိုကော် စတာထွက်သွားပြီးတဲ့နောက် သူ့လိုတိုက် စစ်မှူးမျိုးကို ကျွန်တော်တို့တမ်းတနေခဲ့ရ တာအမှန်ပါပဲ။ ဂီရော့ဒ်၊ မိုရာတာတို့နဲ့ ကစားရတာ ကျွန်တော်နှစ်သက်ပေ မယ့် သူတို့ဟာ ဂိုးတွေသွင်းနိုင် တဲ့တိုက်စစ်မှူးမျိုးထက် ဂိုး ဖန်တီးနိုင်တဲ့ ကစားသမား တွေနဲ့ပိုတူပါတယ်”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဟီဂူအင်သည် အငှားသဘောတူညီ မှုအချိန်မီ အပြီးမသတ်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် စပါးနှင့် လိဂ်ဖလားဒု-အကျော့ပွဲစဉ်ကို လွဲချော်ခဲ့ရသော်လည်း တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ရှက်ဖီးဝမ့်နက်စ်ဒေးနှင့်ကစားရ မည့် အက်ဖ်အေဖလားစတုတ္ထအဆင့် ပွဲစဉ်တွင် ချဲလ်ဆီးအတွက် ပထမဆုံး အကြိမ် ပွဲထွက်ကစားနိုင်ဖွယ်ရှိ ကြောင်းသိရသည်။
ချဲလ်ဆီးနည်းပြဇိုလာ က ”ဟီဂူအင်အနေနဲ့ ရှက် ဖီးနဲ့ပွဲမှာ ပါနိုင်မလားဆို တာ ကျွန်တော်သေချာ မပြောနိုင်ပါဘူး။ သေချာ တာက သူ့ရဲ့ ဂိုးသွင်းမှတ် တမ်းတွေအရ သူဟာ ကျွန် တော်တို့အ တွက် အမှန်တ ကယ် အသုံး ဝင်လာမှာသေ ချာပါတယ်။ သူဟာ ပြိုင် ဆိုင်မှုအနည်း ငယ်အားနည်း တဲ့လိဂ်တစ်ခု ကလာတာဆို ပေမယ့် ဘယ် နေရာမှာမဆို ဂိုးသွင်းနိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ခေတ်တုန်းက အသက်အရွယ်က စကားပြောပေမယ့် အခုခေတ်မှာ ပရော် ဖက်ရှင်နယ်ဆန်ခြင်းနဲ့ ရင်းမြစ်တွေပို ကောင်းလာပြီဖြစ်လို့ ၃၁ နှစ်ဆိုတာ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ”ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဆေးလိပ်နှင့်ဆေးရွက်ကြီးထွက် ပစ္စည်းအပေါ် အခွန်တိုးမြှင့်ကောက်ခံမှုကြောင့် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပ?
မက်လောက်သည့် ကမ်းလှမ်းမှုရှိခဲ့သော်လည်း ဝက်စ်ဟမ်းတွင် အနော်တိုဗစ်ဆက်ရှိမည်
တောင်တရုတ် ပင်လယ်တွင်း အငြင်းပွား ကျွန်းများပေါ်သို့ တရုတ် စစ်လေယာဉ်များ သက်ဆင်းခဲ့ခြင်းအတ